Lapho ekhetha upende ukuze curls, njalo kufanele acabangele hhayi kuphela izitayela fashion nalokho okwenzeka namuhla, kodwa futhi indlela zizongena isithombe esithile futhi ukubukeka. Ngokwesibonelo, amantombazane amaningi ucabange ngalokho izinwele umbala ngeke ivumelane ukuba amehlo aluhlaza.
Kufanele ukuthi umbala oluhlaza samehlo isikhathi eside ngokweqile kubhekwa njengembangela fabulous, imilingo. NgeNkathi Ephakathi, abesifazane namantombazane kuphela umbala iris kungaba bashise esigxotsheni, ucabangela ukuthi uyathakatha oluhlaza okotshani kungaletha umonakalo kubantu noma izilwane noma ngihluphe abanye abantu ngisho nakakhulu. Oh futhi uma kuhlangene amehlo aluhlaza amalangabi ngezinwele ezibomvu! Nokho, akucaci ukuthi kuleli cala ukuthi kwakudingekile ukuba enze abakhileyo Ireland? Phela, kukhona uhlobo ukubukeka itholakala kuyo yonke indawo. Awu, kulungile, Ezihlubuki ngokungajwayelekile medieval - udaba ehlukile. Ake sibuyele okwamanje.
Kufanele sivume ukuthi ngisho nanamuhla oluhlaza okotshani ubuhle abe an amazing, umphumela cishe umlingo zidonse ukunaka kwanoma abanye. Kepha akusikho lokho kuphela amadoda. Kodwa ukuthuthukisa umphumela kumele uzihlole nombala wezinwele.
Ngakho, amehlo aluhlaza: umbala izinwele ukukhetha? Lapha kubalulekile ukuba acabangele yesikhathi esinjengalesi umthunzi iningi iris. elikhanyayo kakhulu, Ukubhoboza amehlo aluhlaza (olubizwa nangokuthi cat) kakhulu, ivelakancane. Kodwa uma intombazane waba nenhlanhla ukuba abe indlovukazi liyingcebo ezinjalo, kungaba Unganqikazi ukuzikhethela curls yabo yimuphi umbala ufisa kuphela. Futhi yilapho kuyoba acebile, ngcono. Yiqiniso, inketho ezikhanga kakhulu futhi win-win - kuba bonke shades of uju, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela, ithusi, zethusi ushokoledi. Uma sikhetha ebumnyameni noma ocebile black umbala, uthola real lady Vamp: zikanokusho, eziyengayo futhi eziyingozi. Futhi, Okumangazayo ngokwanele, ngakho ladies ungaya ngisho umbala omhlophe (nakuba repainted kakhulu namanje ngeke kukusize ngalutho-ke, uzisole izinwele zabo siqu). Ngakho, lesikahle - kungcono umbala obomvu. Luphinde bheka Umbala omkhulu futhi - kulokhu, amehlo egqamile kakade ukuba bathole uzibuthe ezengeziwe eziyengayo.
Futhi lokho umbala izinwele ngeke ivumelane ukuba amehlo aluhlaza, uma i-marsh umthunzi? Lapha, ikhambi ekahle kungaba ithoni elithambile, ezolile futhi emnene. Ithoni ethambile futhi kube lula, lo okukhanya bazwakale amehlo. Kungcono ukukhetha shades ziyadliwa. Une ukukhanya brown umbala izinwele, oluhlaza amehlo? Uzibheka emangalisayo lucky! Ngokuba abanjalo inhlanganisela ongase abizwe ngokuthi ekahle. Ngokuphawulekayo uyobheka futhi abomvu imibala, kanye umthunzi uthulisiwe (kodwa hhayi elikhanyayo ezinesihlungu!): Burgundy, mahogany, mahogany, ithusi. Kodwa nge imicu ezimhlophe Bog amehlo akuzona ngokuvumelana (azodlala kubonakale buthuntu futhi inexpressive), ukuze blonde-platinum repainted ke akudingekile.
Imuphi umbala izinwele kulungile amehlo aluhlaza, uma ... "okusobala '? Lawa amehlo abheke kakhulu njenge-okumsulwa ihlathi echibini elangeni ekuseni, awavamile. Basuke kuhle kuhlangene epholile, amathoni ezolile: bonke shades of Ashen, pearl, ukolo. Lokho zonke lezi zinto kugcizelelwa kunokuba kufihla ubunjalo zemvelo lezi emehlweni. A option enhle - ukugqamisa (ithoni eyisisekelo kuphela kumele kube ukushisa ansundu, bese ufaka ukukhanya nokuqhathanisa kwamehlo ekhululekile futhi wonke isithombe).
Kunokunye ongakwenza, etholakala, ngasendleleni, kaningi. Lokhu umthunzi grey-oluhlaza iris. Yini umbala izinwele ngeke asondele emehlweni oluhlaza zalolu hlobo? Nokho, futhi, okukhiphayo uzobe ayegcwele kanye amathoni brown ezijulile, isibonelo, ikhofi nobisi noma shokolethe. Ayikho umlotha, akukho esivuthayo-bomvu kuleli cala Nokho, asifanele, njengoba embaleni segolide. Nakuba ungakwazi uma ufuna izame, ngezinye izikhathi iletha eminye imiphumela ezithakazelisayo.
Screening Izinwele: ukubuyekezwa kanye nokusetshenziswa izinqubo
Curling Izinwele Babyliss: ukudala isitayela enhle - kungcono ukuthi elula
Zezinwele eyindida futhi njengabesifazane ngakolunye uhlangothi
Umuthi 'Nasonex "izingane nge adenoids: izibuyekezo odokotela
Esiqintini umbhunu e abadala kanye nezingane
Hlobo luni inja ukuba ingane
Metal hose ngoba ikhebula: usayizi, izincazelo, izithombe
Umlingisi Alexander Skvortsov: Filmography kanye nempilo yakho
Isitshalo seqanda ebusika nge amakhowe - zokupheka
Abanye Thessaloniki (Greece): izithombe kanye nokubuyekeza